အပိုဒ်အလွဲသုံးစားမှုရောဂါ | USAHello | USAHello
ပြီးတော့ Ultramobile နှင့်အတူအခမဲ့ဆဲလ်ဝန်ဆောင်မှု
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာတော့လူတွေသည်ဟုဆို “အလှဲအသုံးပွု” မူးယစ်ဆေးသို့မဟုတ်အရက်သေစာသုံးစွဲခြင်းကိုလည်းဆိုးဆိုးရွားရွားသိပ်ဆိုလိုတယ်, ဒါမှမဟုတ်. သငျသညျအရက်တွေအများကြီးသောက်ရသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးတွေအများကြီးနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်ဖြစ်စေအခြားနည်းများ၏အရက်နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုနှင့်အလွဲသုံးစားလုပ်စဉ်းစား.
သငျသညျအလွန်အကျွံမသောက်ရသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးတွေအများကြီးစားရန်မခဲယဉ်း. သင့်ရဲ့သာမန်အသက်တာ၌ပါဝင်ဆောင်ရွက်မနေပါနဲ့အရေးကြီးလှုပ်ရှားမှုများကိုသွားကိုရပ်တန့်ပါလိမ့်မယ် (မိသားစု, အလုပ်နှင့်အားကစား) သောကြောင့်အရက်သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲမှု၏.
သင်သည်သူတို့သင်၏အသက်တာအပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိကိုသိပေမယ့်သင်ကအရက်သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုသောက်ဆက်လက်. ပိုဆိုးတစ်ခုခုလုပ်သည့်အခါအနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုများမှာ. ဥပမာအားဖြင့်, အရက်အများကြီးမသောက်သင်နေမကောင်းခံစားမိပေမယ့်သင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သောက်ဆက်လက်စေသည်.
ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေရရှိရန် Start. သငျသညျအလွန်အကျွံအရက်မသောက်ရတယ်ဆိုရင်ဥပမာ, သင်အသည်းသို့မဟုတ်ဦးနှောက်သို့မဟုတ်နှလုံးသို့မဟုတ်အစာအိမ်အတွက်ပြဿနာများရှိနိုင်ပါသည်.
အရက်သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးသင်၏အသုံးပြုမှုကိုသင်ပုံမှန်လှုပ်ရှားမှုများလေ့ကျင့်ကိုရပ်တန့်စေသည်. ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရက်သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲမှု၏သင့်ကလေးများအတွက်အားကစားဂိမ်းသွားကိုရပ်တန့်ပါလိမ့်မယ်.
သင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအပေါ်အရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးများသည်သင်၏အသုံးပြုမှုနှင့်သင့်မိသားစုအပေါ်သက်ရောက်မှု. ဥပမာအားဖြင့်, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရက်သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲမှု၏အလုပ်လုပ်ရန်မသွားဘူး.
အရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးသငျသညျအသကျရှငျရှိရာအလွန်အရပျ၌ရရှိနိုင်ပါ. ဥပမာအားဖြင့်, United States မှာမြို့ဘားအများအပြားဆံ့. လူအတော်များများဟာသူတို့ရဲ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူအရက်ဆိုင်ကိုသွားကြိုက်တယ်. အရက်မသောက်ဥပဒေရေးရာဖြစ်သောလူများကပျော်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်ထင်သောအရာတစ်ခုခုသည်. ဒါကြောင့်အသက်တာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကြောင့်အရက်ရရှိရန်လွယ်ကူသော.
သငျသညျအများအားဖြင့်သူတို့အလုပ်. အလေ့အထကိုမှန်မှန်အိပ်စက်ခြင်းရှေ့၌သင်တို့အံသွားနိန်ကဲ့သို့သင်တို့ပြုပါအရာတစ်ခုခုသည်. သောက်သုံးအရက်သေစာသင်သည်လျော့နည်းအာရုံကြောခံစားရစေသည်နှင့်သင်ပျော်ရွှင်ခံစားမိစေသည်လျှင်သင်ခံစားရလမ်းကိုမသောက်ရလိုသောကြောင့်, ဥပမာ, သင်ပိုမိုစတင်ရန်စခွေငျးငှါ.
စိတ်ကျန်းမာရေးများအတွက်အခြားစိန်ခေါ်မှုရှိပါတယ်. သင်သည်အခြားစိတ်ရောဂါ, အရက်သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးများအသုံးပြုခြင်း, Self-ဆေးဝါးကနေဆင်းရဲခံရလျှင်. self-ကုသမှုသူတို့ပိုကောင်းခံစားရရန်အရက်သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးအသုံးပြုတဲ့အခါဖြစ်ပါသည်.